Noho izany dia manana hevitra lehibe ianao amin'ny fanaovana vola matotra avy amin'ny indostrian'ny masoandro izay an'arivony tapitrisa dolara fa tsy manana ny mpanjifanao voalohany. Aiza ianao no manomboka? Inona no lazainao? Ahoana no fomba hinoanao handresy lahatra ny tompon-trano iray mba hatokisanay ny herin'ny masoandro ao an-tranony sy ny zava-dehibe kokoa amin'ny volany? Raha tsy manana ny valin'ny fanontaniana amin'ireto fanontaniana ireto ianao dia ity torolàlana fametrahana solar installer ity dia toy izany koa Dingana nataon'i Solar Solar Lalam-piofanana amin'ny fametrahana!
Nanao ny fizarako ara-drariny ny fametrahana solar installer aho tamin'ny fotoana nampitomboako ny orinasan'ny fametrahana solar ahy tany Kimroy Bailey Renewables ary faly aho mizara ireo toro-hevitra sy trikiko. Tsy maintsy lazaiko ny ankamaroan'ny paikady marketing fa tsy nahomby fa ny paikady roa manokana dia nahazo valiny lehibe. Ao amin'ity lahatsoratra ity, hizara ireo toro-hevitra famarotana solar installer roa izay niasa aho ary hiresaka momba izay tsy :).
Voalohany, alohan'ny handehananao lavitra dia avelao aho hilaza fa ity lahatsoratra ity dia tsy hilaza aminao ny hanao dokambarotra amin'ny Facebook, YouTube, Newspaper, TV na Radio. Ity dia torolàlana marketing amin'ny installer sur la bois de bootstrapping hitondra anao amin'ny zero ka mahery fo amin'ny manodidina anao. Faharoa, tsy fanamboarana haingana ity, fa manankarena haingana amin'ny lahatsoratra isan'andro. Ireo toro-hevitra tsotra roa lalindalina roa ireo dia hitondra fotoana hanovana ny mpanjifanao saingy rehefa manao izany ianao dia hamela anao handanjalanja haingana sy hitohy hatrany ny fidiram-bola tsy tapaka amin'ny orinasanao fametrahana solar.
Tetikady famatsiana solar installer # 1: ho mpanjifa voalohany anao & mampiantrano takalon'aina amin'ny solar Barbeque!
Mametraha rafitra solar kely any an-tranonao ho modely maoderina ho an'ny mpanjifanao ho avy. Tsy mila manaparitaka ny bankinao ianao mba hahatratrarana an'io, miaraka amin'ny U $ 2,000 dia afaka mamorona fananganana toekarena azo ianteherana andrefana hamatsiana ny vata fampangatsianao, jiro LED, Laptop, TV ary elektronika vitsivitsy hafa ao an-tranonao. Manome anao ity lahatsoratra ity Torohevitra tsotra 5 hametraka rafitra solar ho an'ny $ 3,000. Ny tanjon'ity rafitra ity dia tsy ny hitondranao ny tranonao eny ivelan'ny faritra fa ny hanehoana fa miasa ny angovo solar. Izy io dia manana tombony fanampiny hanangom-bola amin'ny volavolan-dalàna isam-bolana. Ny ampahany tsara indrindra na dia ny tombony roa avy amin'ny kianja mivarotra izay hahazoana vola betsaka aminao, ary ny kisoa guinea anao izay hanampy anao hahalala ny fisian'ny angovo azo avy amin'ny masoandro mba hahafahany manompo ny mpanjifanao tsara.
Kitiho raha hitaky ny fihenam-bidy ao amin'ny 54% amin'ny Dingana fanofanana amin'ny dingana fanaovan-tsoratsa amin'ny Solar
Aorian'ny fametrahana ny rafitra angovo azo avy amin'ny masoandro miaraka amin'ny fanampian'ny Dingana amin'ny alàlan'ny Step Solar Training Course dia avy eo ny ampahany mahafinaritra, milaza amin'ny hafa momba ny tara-masoandro ary mahazo ny mpanjifanao voalohany. Taorian'ny nametrahako ny rafi-kisoa goavam-be tany an-tranon'ny ray aman-dreniko (izay nipetrahako tamin'izany) dia nahita fomba mahomby hilazana amin'ny hafa ny fametrahana ny masoandro aho. Azonao atao ny mampiantrano barbeque amin'ny Andron'ny Lalao, fialantsasatra, faran'ny herinandro, na inona ny antony hitanao hanasana ireo namanao, mpifanila trano ary olona heverinao fa mety ho liana amin'ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny angovo. Tian'ny olona ny sakafo mahafinaritra sy maimaimpoana.
Ny fika iray mora hahitanao ny rafitrao nefa tsy manery azy dia ny herin'ny fahitalavitra fialam-boly sy ny rafi-mozika amin'ny «cooker» amin'ny fampiasana ny rafitra solar. Izany dia manome azy ho mora kokoa amin'ny resaka resaka. Tsy ny mivarotra ihany no tanjonao fa ny filazàny ny zava-misy mahomby sy mahomby ity rafitra solar ity. Miresaka momba ny fitahirizana ny volavolan-dalàna momba ny angovo sy ny fanamarinana vaovao ahitanao Dingana nataon'i Solar Solar hikarakarana ny 'aretin'andoha' fametrahana solar ho an'ny namanao.
Atolory azy ireo ny karatra fiasanao ary manolora hanao a maimaim-poana famakafakana angovo azo avy amin'ny masoandro. Ny fanombanan-java-masoandro dia dingana iray izay anaovanao manadihady ny tranon'ny olona iray mba hahita ny tombony azo avy amin'ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro, ohatrinona ny ho avonany, ohatrinona ny vidiny, ny safidy isam-bola sns. Ity no hitarika azy ireo amin'ny mety hisian'ny fandehanana masoandro tanteraka na fahazoana rafitra solar starter toa anao ary lasa mpivarotra fiovam-po. Ny fiatrehana mpanjifa dia rehefa manao fanomban-masoandro ianao ary manome fehezanteny ho an'ny mpanjifa ary manapa-kevitra ny mpanjifa hampiasa ny serivisinao.
Tetikady famatsiana solar installer # 2: omeo Fandinihana angovo maimaimpoana
Ka fahombiazana ny barbeque anao dia nanamboatra mofomamy mahafinaritra ny vadinao, ny ekipanao ankafizinao dia nandresy ny lalao ary gaga ny olonao ny fivoaran'ny masoandro ary ny paikady fametrahana ny solar anao dia misy endrika. Ankehitriny dia fotoana tokony hanarahana ireo olona liana 5-10 izay nilaza fa tianao ny hijery ny tranony ary hanome azy ireo vola hametrahana ny masoandro amin'ny fananany. Ireo olona ireo dia antsoina hoe lahimatoan'ny varotra, ny loham-barotra dia ny fifandraisan'ny varotra mety ho olona iray izay maneho fahalianana amin'ny serivisy fametrahana ny masoandro.
Mba hahazoana antoka fa ny fizotry ny varotra dia tsy misy ohatrinona araka izay azo atao, miangavy mba hahazoana antoka fa manolotra maimaimpoana maimaimpoana ianao. Eny, fantatro fa mila mijanona izay tsy maintsy ataonao ianao, mitondra fiara any an-tranony, manolotra ny fotoananao sy ny fahalalanao izay rehetra miakatra amin'ny vidiny ary mety tsy hampiasa ny serivisinao io olona io na mety tsy hampiasa ny serivisinao mba hahafahanao hamerina ireo vola ireo. rehefa manakarama anao amin'ny asa solar izy ireo. Fa matokia ahy, dia sarotra ny hahazoana ny lohalaho voalohany. Izaho manokana dia namily ny lalana hitarika rehefa nihalehibe ny fanavaozana Kimroy Bailey. Sahirana be aho amin'ny fahazoana vola $ 100 amin'ny alàlan'ny saram-pandrenesana ny angovo azo avy amin'ny herinaratra ary ho very ny fahafaha-manao $ 10,000.
Tsara kokoa ny manana tongotra ao anaty varavarana (ara-bakiteny) noho ny mijanona any ivelany satria te-hiditra $ 100 ianao hiditra ao anaty varavarana. Ity andiam-pamokarana solar $ 100 ity dia antsoina hoe fivarotana varotra. Ny fifamaliana eo amin'ny varotra dia azo faritana ho fanoherana ara-tsaina amin'ny singa omena amin'ny fizaranao ny masoandro. Na dia azonao atao aza ny manamarina izany fiampangana izany dia fitaovana hanarenana ny fandanianao ny masoandro, ny mpanjifa kosa manontany tena hoe "maninona aho no mandoa anao mba handoavana anao." Eritrereto ny mividy gilasy iray ary mijanona eo am-baravarana ny tompony ary miampanga anao izy satria tsy maintsy mangatsiatsiaka ny gilasy ary raha ny filazany dia lafo ny vata fampangatsiahana. Manakarama azy eo am-baravarana ianao hihazona mangatsiaka ny gilasy ary avy eo ianao miditra ao ary mandoa ny mpanantona vola ho an'ny gilasy. Nialanao vola izy mba handoavana azy. Na izany na tsy izany, alohan'ny nampifangaroako ny tenako amin'ity zavatra ara-psikolojiko ity ny fitsipiko ny ankaviana dia izao; Aza manantona fanombanana ny masoandro raha tsy efa nametraka rafitra 20 solar panel farafahakeliny.
Maninona raha miandry mandra-fametrahanao rafitra solar 20?
Amin'ity indray mitoraka ity dia tokony hisy zavatra roa hitranga, dia ho tsara laza ianao amin'ny olona hiantso anao ary hangataka anao hanao fanombanana ny masoandro. Mba hamaritana fa tena ratsy ny antso ananan'ireo mpanjifa dia azonao atao ny mampihatra sara kely ho an'ny serivisy fanombohana ny masoandro. Faharoa, mety hahazo antso be loatra ianao amin'ny fanombanan-masoandro ka hanomboka hampitombo sy hampisy fiatrao izany raha tsy hoe miova 30% amin'ireo tombana ireo ianao na mitady fomba hafa handrakofana ny vidiny mifandraika amin'ny mpikamban'ny ekipa hanao izany. fanombanana ny masoandro ary omanina ireo teny voalaza ireo.
Famaranana amin'ny famarotan-tena avy amin'ny Solika
Ny tsikera haingana iray dia ny hoe tsy misy ny fifamoivoizana varotra amin'ny fanomezana fanombanana maimaimpoana amin'ny masoandro any an-trano iray, hanaiky izy ireo haingana. Aorian'ny famenoanao ny fanombanana ny masoandro dia azonao atao ny manisy fehezanteny ary miandrasa am-bavaka mba hanomezana anao antso ary hahazo ilay asa. Fa raha manolotra mandoa olona ho an'ny fanombanan-jaza ianao dia tsy atolotra intsony fa lasa amidy ankehitriny. Aza adino fa tsy ao amin'ny fanombanan-masoandro ny tombam-bolanao, dia ao amin'ny fametrahana ny masoandro ary mila fanombanana ianao mba hahazoana fametrahana.
Raha nandrakotra ny basikety ianao ary efa manana mpanjifa vitsivitsy avy ao amin'ny fehikibonao ary te hampitombo ny mpanjifanao ianao dia mety hamaky ny lahatsoratra manaraka momba ny fampiroboroboan'ny fanjakanao masoandro. Ity lahatsoratra ity dia hanome ny teknolojia famaritana solar installer.
Misaotra betsaka anao amin'ny fotoana nandanianao an'ity lahatsoratra ity. Manantena aho fa nahita izany ny fanabeazana. Raha tianao ny hidirantsika lalindalina kokoa amin'ny faritra misy ny fametrahana ny masoandro dia afaka misoratra anarana amin'ny Fitsapana maimaimpoana maimaimpoana ao amin'ny Dingana nataon'i Solar Solar Fianarana fanofanana momba ny fametrahana. Azafady azafady manampy ny fanamarihana na fanontanianao eto ambanin'ity lahatsoratra ity. Ity no #TeamKB Andao isika #KeepBelieving
29Jan Janoary 29, 2012
Jamaika azo havaozina 100%
Jamaica amin'izao fotoana izao dia manana toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra any Anglisy Karaiba miteny. Kimroy Bailey Jamaica, "renivohitr'i Sunshine ao ... hamaky bebe kokoa
25Jul Jolay 25, 2013
Mangataka fanohanana: KB Foundation Tag Drive
The Kimroy Bailey Foundation: Andian-tsarimihetsika mifaly sy mahafinaritra amin'ny hetsika natao hanangonana vola ho an'ny 100% voalohany any Karaiba ... hamaky bebe kokoa
06Feb Febroary 6, 2014
Rivo-drivotra no manatanjaka ny vondron'olona iray manontolo!
Fony tany amin'ny oniversite nandinika momba ny Engineering Electrical and Computer Engineering aho dia nahita lahateny TED nataon'ny tanora Malawian iray ... hamaky bebe kokoa
20Nov Novambra 20, 2012
Smile Jamaica dia manasongadina ny tafio-drivotra mahery vaika an'ny UTV
Ny alatsinainy 19 novambra 2012, dia naseho tamina fandaharana tamin'ny maraina tao amin'ny TVJ aho: Smile Jamaica. Natao ny fanadihadiana ... hamaky bebe kokoa
18Dec Desambra 18, 2014
Mpianatra avy ao Ardenne High ao amin'ny KB Robotics Booth Kimroy Bailey Robotics dia nanao fampisehoana fampisehoana goavana amin'ny fanapahana jamaika ... hamaky bebe kokoa
24Nov Novambra 24, 2012
Masoandro, fasika, ranomasina ary faharetana Ny Kimroy Bailey Foundation dia mijery ny Jamaika izay azo havaozina tanteraka, izay mampihena ny fanafarana solika ny firenentsika ... hamaky bebe kokoa